Bambalwa abantu abadala akazi ukuthi, "ama-Hennessy" - brandy, ngaphezu kwalokho, futhi elalidume kunawo wonke abamele engcono yale isiphuzo. Kodwa abaningi abaqapheli ukuthi utshwala French wadala akuyona engumFulentshi kanye Irishman ngubani ukuthi kuningi engikwaziyo vysokogradusnom utshwala. Emuva ngo-1765, lapho uRichard Hennessy kuqeda enkonzweni yakhe emabuthweni ahlomile waseFrance King Louis-15, wahlala edolobheni Cognac e ningizimu-ntshonalanga yeFrance. brandy Local ngakho kwadingeka ukuba bathanda yini lempi wangaphambili unqume bahlanganyele emsebenzini wokukhiqiza izinhlobo zophuzo oludakayo. Ngawo lowo nyaka ke yabhaliswa lokuhweba "Hennessy", okuyinto ihlobe waboleka umndeni Crest induna isibonakaliso esime isandla zempi nge kokufaka halberd.
"Ama-Hennessy" - brandy, okuyinto vele ngemva kweminyaka eyikhulu yasungulwa, ubelokhu etafuleni cishe yonke imikhaya yasebukhosini Europe, kuhlanganise nendlu ka Romanov. ERussia, lesi siphuzo uvele 1818 egcekeni inkosi, futhi ngemva kweminyaka eyishumi Petersburg wavula olusemthethweni ukuhweba Umsebenzi wokuqala "Hennessy".
Cognac yalesi brand uye kwakuqala ukwanda emhlabeni wonke - cishe u-90% ukukhiqizwa yayo athunyelwa kwamanye amazwe. Kufanele kuqashelwe ukuthi izindlalifa Hennessy ngenkuthalo ukunqoba izimakethe hhayi kuphela e-Europe nase-North America, ngaphambi umkhiqizo wabo akakwazanga ukumelana ne-Australia nase-Asia. Okwavelela isu marketing brand bekulokhu ukuthi "ama-Hennessy" - brandy, okungasekelwe kuphela ingashintshwa ukuze izici kazwelonke yale noma kulelo zwe, kodwa futhi athathe wonke amasiko futhi sengqondo kangcono. Ngokwesibonelo, ubuhle of emigqeni oyindilinga bottle uphawu "Hennessy" - leli thonya okungokwesiko bokubeka Japan.
Ngokumangalisayo, ngakho izindlalifa umsunguli manje oshayelayo lenkampani. Namuhla, kuyinto Maurice-Richard Hennessy - ozalweni induna yebutho Louis-15, okuyinto iminyaka engaphezu kuka-250 edlule udale nogologo emangalisayo futhi wamnika igama lakhe. Inkampani "Hennessy" - kuyinto umndeni indaba ezingavamile. Ngakho, ngo-1800 umgcini eyinhloko zewayini kanye wineries, "ama-Hennessy" waqokwa Yan Filyu. Namuhla, lesi sikhundla efanayo usebenza ozalweni yayo lwesikhombisa!
Lokhu isiphuzo lwenzelwe ephezulu umthengi, okungukuthi, ukukhokhela ukuba uphuze utshwala kuleli banga intengo bengayi wonke umuntu. Nokho, kuyindida ukuthi kwaba nogologo "Hennessy" (05 amalitha) ubhekwa umholi emakethe in nogologo mass. Mhlawumbe lokhu zingachazwa ngezinqubo yokuthi izigidi ezingu amahlanu uphawu "Hennessy", ekhiqizwa inkampani efanayo, siba mbumbulu izikhathi ezintathu noma ezine ngaphezulu, ubeke esiseduze phesheya. Kusho ukuthini lokhu? Iqiniso lokuthi ukuthenga nogologo "Hennessy", intengo 05 amalitha okungakwazi kube ngaphansi kuka $ 50, engozini ukuthenga isiphuzo ekude kakhulu kulokho eqale iyikho.
Ukuqhubekela lokhu nogologo waqala cishe ngokushesha ngemva kokuba indalo yayo. Ngesikhathi yayibizwa ithengiswe imiphongolo, okuyinto lula kakhulu umsebenzi, ngoba ukunambitheka ukuhlukanisa real "Hennessy" manga bahluleka bonke. Namuhla, le nogologo okuthengiswa iziqukathi okukhethekile ezinobukhulu obuhlukahlukene. Izindleko yalezi amabhodlela ngokwako eside, futhi ngaleyo ndlela ukuhlukanisa umkhiqizo bangempela kusukela imphahla kwasekuqaleni kungaba isembozo kanye ibhodlela.
Makeup black izithunzi. ukwakheka amnyama